Justin Bieber ရဲ့ တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ် ပြောင်းလဲလာပုံအဆင့်ဆင့်။ – SoShwe
Home/Entertainment/Justin Bieber ရဲ့ တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ် ပြောင်းလဲလာပုံအဆင့်ဆင့်။
Justin Bieber ရဲ့ တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ် ပြောင်းလဲလာပုံအဆင့်ဆင့်။
Justin Bieber ဟာ၂၀၀၇ ခုနှစ် အသက် (၁၄)နှစ်အရွယ်ကတည်းက သီချင်းစဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီး အိပ်မက်တွေ၊ စိတ်ကူးတွေကို အကောင်အထည်ဖော်နေတဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကောင်းလေးတစ်ယောက်အဖြစ် လူတွေ စတင် သိရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုချိန်မှာတော့ အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ အဆိုတော်တစ်ယောက် ဖြစ်နေပြီဆိုပေမယ့်လည်း ဒီ (၁၀) နှစ်ကျော်ကာလအတွင်း သူဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့၊ တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ အခက်အခဲတွေ၊ ဒုက္ခတွေကလည်း မနည်းလှပါဘူး။ (၁၀) နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာလည်း တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ် သိသိသာသာ ပြောင်းလဲလာတာကိုလည်း တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် . . .
၁။ August 2007
ဂီတာတီးပြီး သီချင်းဆိုနေတဲ့ Justin Bieber ကို ၂၀၀၇ ခုနှစ်က တွေ့မြင်ရပုံ။
၂။ August 2009
၂၀၀၉ ခုနှစ်က သူ့ရဲ့ တစ်ဟုန်ထိုး နံမည်ကြီးခဲ့တဲ့ Baby သီချင်းထဲမှာ တွေ့မြင်ရပုံ။
၃။ July 2011
Justin Bieber နဲ့ Selena Gomez တို့ လူသိရှင်ကြား တရားဝင် စတင် တွဲခုတ်ခဲ့ချိန်။
၄။ April 2012
သူ့ကောင်မလေး Selena နဲ့ Basket Ball ပွဲ အားပေးနေပုံ။
၅။ November 2012
လက်မှာ ဇီးကွက်ပုံ Tattoo စတင်ထိုးခဲ့ပြီး Victoria’s Secret ဖက်ရှင်ရှိုးမှာ ဖျော်ဖြေခဲ့ပုံ။
၆။ June 2013
၂၀၁၃ သို့ ရောက်ရှိလာပြီးနောက် ခန္ဓာကိုယ်လည်း တဖြည်းဖြည်း တောင့်တင်းလာပြီး လက်မောင်းပေါ်မှာလည်း ကျားပုံ Tattoo အသစ်နဲ့ တွေ့မြင်ရပုံ။
၇။ May 2014
Suit အပြည့်နဲ့ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တစ်ခုသို့ တက်ရောက်လာပုံ။
၈။ September 2014
Fashion Rock Event တွင် Calvin Klein ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Lara Stone နဲ့အတူ တွေ့မြင်ရပုံ။
၉။ December 2014
၁၀။ March 2015
ကောင်မလေးများရဲ့ အသည်းနှလုံးကို ကြွေကျအောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အပြုံးပိုင်ရှင်။
၁၁။ May 2015
ရွှေရောင်ကုတ်အင်္ကျီကို ဝတ်ဆင်ပြီး တရုတ်မှာပြုလုပ်တဲ့ Met Gala ဖက်ရှင်ပွဲသို့ တက်ရောက်လာပုံ။
၁၂။ November 2015
ပုံစံအသစ်၊ ဒီဇိုင်းအသစ်နဲ့ တွေ့မြင်ရပုံ။
၁၃။ February 2016
တစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ် ပုံစံချင်း လုံးဝမတူတော့ဘဲ အနက်ရောင် ရှပ်အကျႌနဲ့ အဖြူရောင် ကုတ်အကျႌကို တွဲဖက်ဝတ်ဆင်ကာ Grammy ဆုပေးပွဲသို့ တက်ရောက်လာပုံ။
၁၄။ March 2016
ဂျင်းဘောင်းဘီအပြဲ၊ Vintage တီးရှပ်နဲ့ Headband ကိုဝတ်ဆင်ကာ စတိတ်စင်ပေါ်တွင် ဖျော်ဖြေနေပုံ။
၁၅။ February 2017
ဆံပင်ပုံစံကို ကတုံးဆံပင်ပေါက်ပုံစံ ပြောင်းလိုက်ပြီး သိသိသာသာ ပြောင်းလဲသွားတဲ့ JB.
၁၆။ August 2017
Golf ကွင်းထဲမှာ တွေ့မြင်ရပုံ။
၁၇။ February 2018
တစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ် မတူညီတဲ့ပုံစံကို ပြောင်းလဲတတ်တဲ့ JB ကို ၂၀၁၈ခုနှစ် နှစ်စပိုင်းက တွေ့မြင်ရပုံ။
၁၈။ July 2018
Hailey Baldwin နဲ့ တရားဝင်စေ့စပ်လိုက်တဲ့ JB
Justin Bieber ရဲ႕ တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္ ေျပာင္းလဲလာပုံအဆင့္ဆင့္။
Justin Bieber ဟာ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ အသက္ (၁၄)ႏွစ္အရြယ္ကတည္းက သီခ်င္းစဆိုခ့ဲတာျဖစ္ၿပီး အိပ္မက္ေတြ၊ စိတ္ကူးေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတ့ဲ ခ်စ္စရာေကာင္းတ့ဲ ေကာင္းေလးတစ္ေယာက္အျဖစ္ လူေတြ စတင္ သိရွိလာတာျဖစ္ပါတယ္။ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားတ့ဲ အဆိုေတာ္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနၿပီဆိုေပမယ့္လည္း ဒီ (၁၀) ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း သူျဖတ္သန္းခ့ဲရတ့ဲ၊ ေတြ႕ႀကံဳခ့ဲရတ့ဲ အခက္အခဲေတြ၊ ဒုကၡေတြကလည္း မနည္းလွပါဘူး။ (၁၀) ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္းမွာလည္း တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲလာတာကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္ . . .
ဂီတာတီးၿပီး သီခ်င္းဆိုေနတ့ဲ Justin Bieber ကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က ေတြ႕ျမင္ရပုံ။
၂၀၀၉ ခုႏွစ္က သူ႕ရဲ႕ တစ္ဟုန္ထိုး နံမည္ႀကီးခ့ဲတ့ဲ Baby သီခ်င္းထဲမွာ ေတြ႕ျမင္ရပုံ။
Justin Bieber နဲ႔ Selena Gomez တို႕ လူသိရွင္ၾကား တရားဝင္ စတင္ တြဲခုတ္ခ့ဲခ်ိန္။
သူ႕ေကာင္မေလး Selena နဲ႕ Basket Ball ပြဲ အားေပးေနပုံ။
လက္မွာ ဇီးကြက္ပုံ Tattoo စတင္ထိုးခ့ဲၿပီး Victoria’s Secret ဖက္ရွင္ရႈိးမွာ ေဖ်ာ္ေျဖခ့ဲပုံ။
၂၀၁၃ သို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီးေနာက္ ခႏၶာကိုယ္လည္း တျဖည္းျဖည္း ေတာင့္တင္းလာၿပီး လက္ေမာင္းေပၚမွာလည္း က်ားပုံ Tattoo အသစ္နဲ႕ ေတြ႕ျမင္ရပုံ။
Suit အျပည့္နဲ႕ ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္တစ္ခုသို႕ တက္ေရာက္လာပုံ။
Fashion Rock Event တြင္ Calvin Klein ရဲ႕ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ Lara Stone နဲ႕အတူ ေတြ႕ျမင္ရပုံ။
ေကာင္မေလးမ်ားရဲ႕ အသည္းႏွလုံးကို ေၾကြက်ေအာင္ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္တ့ဲ အၿပံဳးပိုင္ရွင္။
ေရႊေရာင္ကုတ္အကႌ်ကို ဝတ္ဆင္ၿပီး တရုတ္မွာျပဳလုပ္တ့ဲ Met Gala ဖက္ရွင္ပြဲသို႕ တက္ေရာက္လာပုံ။
ပုံစံအသစ္၊ ဒီဇိုင္းအသစ္နဲ႕ ေတြ႕ျမင္ရပုံ။
တစ္ႏွစ္နဲ႕တစ္ႏွစ္ ပုံစံခ်င္း လုံးဝမတူေတာ့ဘဲ အနက္ေရာင္ ရွပ္အက်ႌနဲ႕ အျဖဴေရာင္ ကုတ္အက်ႌကို တြဲဖက္ဝတ္ဆင္ကာ Grammy ဆုေပးပြဲသို႕ တက္ေရာက္လာပုံ။
ဂ်င္းေဘာင္းဘီအၿပဲ၊ Vintage တီးရွပ္နဲ႕ Headband ကိုဝတ္ဆင္ကာ စတိတ္စင္ေပၚတြင္ ေဖ်ာ္ေျဖေနပုံ။
ဆံပင္ပုံစံကို ကတုံးဆံပင္ေပါက္ပုံစံ ေျပာင္းလိုက္ၿပီး သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲသြားတ့ဲ JB.
Golf ကြင္းထဲမွာ ေတြ႕ျမင္ရပုံ။
တစ္ႏွစ္နဲ႕တစ္ႏွစ္ မတူညီတ့ဲပုံစံကို ေျပာင္းလဲတတ္တ့ဲ JB ကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ႏွစ္စပိုင္းက ေတြ႕ျမင္ရပုံ။
Hailey Baldwin နဲ႕ တရားဝင္ေစ့စပ္လိုက္တ့ဲ JB
Previous Marvel ဇာတ်ကောင်များကို ဖန်တီးခဲ့တဲ့ Stan Lee ရဲ့ ဖြောင့်မတ်မှု၊ ရဲရင့်မှုကို ဖော်ပြနေသော စကားစုများ။
Next အသက်ဘေးက လွတ်မြောက်ဖို့အတွက် အစာအိမ်ထဲ ဘီယာ (၁၅) ခွက် လောင်းထည့်ခဲ့ရတဲ့ အမျိုးသား။